Ike elu nke elu igwe nke na-eme kaịlọn dị ike
Ngwunye nke Nylon High Makes, Ike Njikere Njikere
Ngwunye eri akwa akwa akwa nke nwere mkpụrụedemede bụ nke nwere nylon 6 na nylon 6.6. Ọ nwere ike dị elu, na-eyi uwe na-eguzogide ma na-eguzogide corrosion. Ọ nwere ike ijigide ike nkịtị na gburugburu akọrọ na mmiri. Ya mere, a na-eji akwa akwa akwa akwa nylon eme ihe na ngwaahịa akpụkpọ anụ, arịa ụlọ, n'èzí na mpaghara ndị ọzọ.
ihe: Naịrọ nke 100%
Kedu ihe kpatara ịhọrọ MH Nylon siri dị ngbanye akwa?